Home News 80 Ruux oo lagu Dilay Dagaal dhex-maray Beeraley Iyo Xoolaley
80 Ruux oo lagu Dilay Dagaal dhex-maray Beeraley Iyo Xoolaley
Afhayeenka Boliska BALATEO ee Bartamaha dalkaasi, Mathias Tyopev, ayaa sheegay in 86 qof lagu dilay iska horimaadkaasi oo ka dhacay Gobalka kadib, markii ay dagaalameen labadaasi dhinac.
Afhayeenka waxa kale oo uu tilmaamay in dagaalkaasi dhex maray Muslimiin Xoola-dhaqato ah iyo Kirishtaan Beeraley ah.
Ugu yaraan 50 guri ayaa lagu burburiyey iska horimaadkaasi oo dhacay saqdii dhexe ee xalay.
Guddoomiyaha Gobalkaasi, Simon Bako waxa uu ku dhawaaqay Bandow socon doona 6-da maqribnimo ilaa 6-da aroornimo, waxaana la mamnuucay Dhaqdhaqaaqa Guud ee Deegaankaasi.
Dhinaca kale, Madaxweyne dalka Nigeria, Maxamadu Buhaari waxa uu ku baaqay in la joojiyo dagaalka, lana soo qabto kuwii weerarka geystay.
Previous articleDaa’uud Sheekh Axmed oo lasoo taagay Maxkamad ku taal Jesiiradda Malta
Next articleXog:-5-Gudoomiye oo lagu Xiray Godka Jilicoow
Kacdoon shacab oo ka bilaawday Magaalada Baydhabo! Doonimayno Sharif Hassan!
Saraakiil ka Tirsan Al-shabaab oo Howlgalo Qorsheeysan lagu Qaarajiya (Aqriso Magacyadooda)